Mogadishu Journal » 2019 » August » 12
Mjournal :-Xujey ku sugan magaalada Makka ayaa sheegay inaysan weli gudanin waajibaadka xajka iyaga oo eedo u jeediyey shirkadaha loo idmay inay xujayda u adeegaan. Xujeydan oo la hadlay VOA ayaa sheegay in shirkadihii keenay ay meel cidlo ah isaga tuureen, islamarkaana ay garan...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (Laftagareen) aya guddi soo baara u Magacaabay dhacdadii dadka lagu dilay ee 9-kii Bishaan ka dhacday Magaalada Baydhabo. Guddiga oo ka kooban 9 xubnood ayaa isgu jira Wasiiro ka tirsan koonfur...
Mjournal :-Sii-hayaha xoghayaha Amniga Qaranka Maraykanka ayaa difaacay howlgallo axaddii lagu soo qabtay boqlaal qof oo ka mid ah dadka sida sharci-darrada ah ku joogay Maraykanka. Howlgalkan ayaa lala beegsaday qaar ka mid ah warshadaha cuntada farsameeya ee gobolka...
Mjournal :-Wararka laga helayo Magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ee Maamulka Puntland ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi goordhow lagu dilay Nin u dhashay dalka Kenya. Ninka la dilay ayaa waxaa la sheegay in uu ka Shaqeynayay shirkad Kaluumeysi,isla markaana dilkiisa uu...
Mjournal :-Wararka laga helayo Magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in halkasi uu Maanta ka dhacay qarax khasaaro geystay kaas oo jugtiisa laga maqlay Xaafadaha kala duwan ee Magaaladaas. Qaraxa oo ahaa miinada noocad hulka lagu aaso ah ayaa...
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ka hadlay howlgalalda Ciidamada Dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa DANAB ay ka wadaaan deegaano ka tirsan Gobolkaas. Guddoomiye Najax waxaa uu sheegay in howlgalka uu yahay mid qorsheysan oo ay...
Mjournal :-Kooxo Burcad Koonfur afrikan ah ayaa u dhacay Goobo Ganacsi ay leeyihiin dad Ajaanib ah oo ku yaalla dalkaas, iyaag oo qaatay lacag iyo Agab kale oo yaallay Goobahaasi Ganacsi. Wararka laga helayo dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ay sheegayana in kooxaha Burcada ay...
Mjournal :-Dowladaha Kenya iyo Jabuuti ayaa xilligaan waxaa ay loolan adag ugu jiraan helida kursi ka mid ah 15-ka xubnood ee Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey,kaas oo ay tartan dugu jiraan labada dowladood. Dowladaha Afrika oo uu horyaallo kursigaan ayaa waxaa loolan ugu...